Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ amalitela ịbagide n'amụma imemila ajọ nsogbu ide mmiri n'Ọnịsha nakwa ebe ndị ọzọ gbara ya gburu gburu, ma bụrụkwa nke a ga-eme ka ọ dị irè site na njikọ aka ọnụ nke ọchịchịṅsteeti ahụ na ụlọ ọrụ "Special Climate Change Fund" (SCCF) n'okpuru atụmatụ "Nigerian Erosion and Watershed Management Project" (NEWMAP).
Ya bụ ọrụ ngo, bụ nke a maara dịka "Onitsha Storm Water Management Master Plan" bụ nke e nwere nnọkọ mbụ maka inye nkụzi banyere ya n'ụbọchị Tuzdee gara aga, ma bụrụkwa nke ebumnobi ya bụ iji ghọta ebe iju mmiri ahụ na-esi apụta nakwa otu a ga-esi weta n'isi njedobe, nsogbu iju mmiri na ide mmiri na mpaghara Ọnịsha niile na obodo ndị gbara ya gburu gburu.
N'okwu ya, gọvanọ Obianọ kọwara na ọchịchị ya dị ma na-egosipute ezi njikere iji buso agha megide nsogbu ide mmiri, mbize na ihe ndị ọzọ na-echere obodo dị iche iche na steeti ahụ aka mgba, obodo ọbụla n'oge nke ya.
Ọ kọwara Ọnịsha dịka ụzọ mbata nke mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị nakwa ebe ọnọdụ akụnụba ya hibere isi, ma bụrụkwa ihe mere e jiri wee họrọ ebe ahụ maka ya bụ ọrụ ngo, tinyekwuoro na ọ bụ n'ebe ahụ ka mmiri dị iche iche si ehuga.
O kwuru na a ga-eweputa atụmatụ ọrụ bụ ịgba n'iji tinye ya bụ amụma n'ọrụ site n'ịme nchọpụta banyere ebe e kwesiri ịrụnyesi ụmụ ihe dị iche iche, ihe e ji aghọkọ mmiri, ebe mmiri si aga, akụrụ ngwa e ji akwalite ọnọdụ obibi ndụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ọtụtụ ndị mmadụ ndị kwuru okwu ma tụpụtakwa atụmatụ dị iche iche n'ọgbakọ nkụzi ahụ nyere ntụzi aka ka e mezuputa iwu niile nke ụlọ ọrụ ASWAMA iji wee nwe ike ịbagide n'ọrụ ahụ ma rụkwa n'ozuzu oke na n'otu o kwesiri.
N'okwu nke ya, onyeisi oche okpuru ọchịchị Ọnịsha Sawụtụ bụ maazị Emeka Asọanya kelere ọchịchị steeti Anambra n'okpuru gọvanọ Willie Obianọ na otu pati APGA maka ezi ịgba mbọ ya n'imelila nsogbu ide mmiri na-ebi ndị mpaghara ahụ aka ọjọọ, ma kwuo na okpuru ọchịchị ahụ ga-enye ya nkwado zuru oke, ọ kachasị site n'inye ndị mmadụ nkụzi na ịdọ ha aka na ntị banyere ịwụnye ahịha n'ọwà mmiri. O kwuru hoohaa na nsogbu ha bụ ide mmiri, ma sịkwa na ihe ha chọrọ bụ ka e mee ka ọ na-ehùnye n'osimiri Naịja.
Na mbụ n'okwu ya, onye nhazi otu NEWMAP na steeti ahụ, bụ maazị Michael Ivensọ, nke onye nọchitere anya ya bụ onyeisi na-ahụ maka ihe ndị a na-egwuputasị n'ala n'ụlọ ọrụ ahụ, bụ maazị Emenike Ajulufo kwuru na ọrụ ahụ bụ n'ihi mbọ ezughịike nke gọvanọ Willie Obianọ, onye gbatara ọsọ ego n'ụlọ ọrụ SCCF n'okpuru atụmatụ NEWMAP.
Na ntụnye nke ya, eze ọdịnala Ọnịsha, bụ Igwe Alfred Achebe, nke onye nọchitere anya ya bụ onye ndu nke obodo ahụ, bụ maazị Osita Anịọnwụ toro gọvanọ Willie Obianọ nakwa ndị NEWMAP maka njikọ aka ha na ịgba mbọ ha, ma rịọkwa ka onye ọbụla dọnyere ha ukwu ma nye ha nkwado iji wee rụchapụ ya bụ ọrụ oge na otu o kwesiri.